SkAdNetwork? Ubumfihlo beSandbox? Ndimi nge MD5s | Martech Zone
Isibhengezo sika-Apple sikaJuni 2020 sokuba i-IDFA iya kuba yinto yokungena kubathengi ngo-Septemba 14 ukukhutshwa kuka-Septemba beziva ngathi ityali irhuqiwe phantsi Umzi mveliso weentengiso ezingama-80 ezigidi, Ukuthumela abathengisi ukuba batyhafe ukuze bafumane into elandelayo elungileyo. Sele kudlule iinyanga ezimbini, kwaye sisaqala iintloko.
Ngoku kutshanje ukuhlehliswa okufuneka kakhulu kude kube ngu-2021, thina njengeshishini kufuneka sisebenzise eli xesha ngokufanelekileyo ukufumana umgangatho omtsha wegolide wokuqokelela idatha yabathengi; enye ejongana neenkxalabo zabucala ngelixa ikwazi ukujolisa kwi-granular. Kwaye ndiyakholelwa, kwibhodi iphela, loo mgangatho mtsha yi-MD5 ye-imeyile hash.
Umyalezo we-MD5-digest algorithm ngumsebenzi osetyenziswa kakhulu we-hash ovelisa ixabiso le-hash eyi-128-bit.
Uninzi kumzi mveliso ulinde kumaphiko SkAdNetwork ka-Apple kwaye Ibhokisi yesanti kaGoogle Chrome, kodwa zombini zinezinto ezininzi ezingalunganga. Zombini zithintela urhwebo oluvulekileyo njengoko zivaliwe kwindalo ephantsi kwazo kwaye ziqhutywa ngamaqonga ngokwawo. Ukuba umzi mveliso uyangqinelana nolwakhiwo lwezixhobo zentengiso, ezi ngxilimbela zeetekhnoloji ziya kuba nakho ukuqhubeka nokuzilawula nokukhusela ukuqhubela phambili kwishishini ngaphandle kokuba kwenziwe omnye umgangatho ovulekileyo ngakumbi.
I-SKAdNetwork sisakhelo sokugcina ngasese unikezo lokufaka. Ijolise ekuncedeni ukulinganisa amaqondo okuguqula amaphulo okufaka ii-app (CPI) ngaphandle kokubeka esichengeni ulwazi lwabasebenzisi.
Yintoni i-SKAdNetwork kwaye yenza ntoni?
Ukongeza, ezi nkqubo ziphoswa lelona xabiso longezelelekileyo lokongeza ekujoliseni- idatha yexesha lokwenyani. Kuba izaziso zokunikezelwa zithunyelwa phakathi kweeyure ezingama-24 ukuya kuma-48 emva kwenyani, abathengisi abayi kuba nakho ukujolisa abathengi ngalo mzuzu besemarikeni kwaye abayi kuba nakho ukubopha imisebenzi ye-app ngexesha elithile, elithintela ukusebenziseka kwedatha ngokwayo.
Ngaphandle kwazo zonke ezi ngxaki, akufuneki sityeshele umngcipheko wokuvumela iinkampani ezimbini ukuba zilawule yonke le datha inxulumene nemfihlo. Esi sizathu sodwa kufuneka sanele ukuba umzi-mveliso ume kancinci ngaphambi kokwamkela izisombululo ezicetywayo ngu-Apple noGoogle.
Ukuthintela ezi tech-goliath ekubeni babe ngabagcini-masango abanamandla ngakumbi kubathengi, zombini intengiso kunye noshishino lwentengiso yedijithali kufuneka ime ngesisombululo esivulekileyo ngakumbi sedatha yokuchonga.
Ngenxa yokuba ii-MD5 ziimitya ezinamacala amathandathu eziguqulweyo zivela kwidilesi ye-imeyile eye yadlula kwi-hashing algorithm, yonke inkqubo yenkqubo yolwazelelelo ngolwazi lwabathengi ezantsi kwendlela enye engenakubophelela kulowo mntu. Ukuza kuthi ga ngoku, sisazisi esigxile kubucala esinokuthi siqhagamshele ngokukhuselekileyo idatha ukwenza iiprofayili zomsebenzisi ezingaziwayo kodwa sisakwazi ukujolisa kwiintengiso kwinqanaba legranular.
Kuba abathengi ngokubanzi bagcina idilesi enye ye-imeyile eyiminyaka eliqela, ii-MD5 zinemephu enkulu yokuziphatha kwedijithali kunye nomsebenzi, kwaye ke, nayiphi na iwebhusayithi, usetyenziso, okanye iqonga elinesiseko somsebenzisi esibhalisiweyo liya kuba nakho ukuxhamla kwidatha eyomeleleyo, intengiso ubudlelwane, kunye nokwenza imali.
Isisombululo esivavanywe ixesha kunye nesiqinisekisiweyo, ii-MD5s, ngakumbi ngokubambisana nolwazi lweedilesi ze-IP, ziya kuba yeyona nethiwekhi isebenzayo ukuqhubela phambili kwikamva ngaphandle kwee-MAID. Ngee-MD5s, abathengisi baya kuba nakho ukufikelela kubathengi abanokubakho kuluntu olukwi-Intanethi apho abasebenzisi babhaliswe khona, kwaye loo datha inokuqhagamshelwa kubo ukuze bakhe izinto eziluncedo, ngelixa zingaziwa, iiprofayili. Ukuba ukwamkelwa ngobuninzi kwenzeka, ixabiso loluntu kwi-Intanethi liza kunyuka ngokubonakalayo.
Ii-ID zeNtengiso eziSelfowuni okanye ii-ID zeNtengiso eziSelfowuni: umsebenzisi-okhethekileyo, onokusetha kwakhona, isazisi esingaziwayo esinxulunyaniswa nesixhobo somsebenzisi we-smartphone kwaye sixhaswe yinkqubo yokusebenza kweselfowuni. Ii-MAID zinceda abaphuhlisi kunye nabathengisi ukuba babone ukuba ngubani osebenzisa usetyenziso lwabo.
Inyani yile, akukho into elandelayo efanelekileyo, ubuncinci okwangoku. Nangona kunjalo, i-MD5 yindawo ethambileyo kakhulu emhlabeni kunakwimihlaba kaGoogle okanye Apple. Akufuneki ukuba sihlale kwinkqubo evaliweyo ukuhlangabezana neemfuno zabucala. Ukukhusela ulwazi lwabathengi kunye nolwazi olubuthathaka kubalulekile, kodwa kufuneka sikwazi ukubonelela iimfuno zabasebenzisi kwaye sibanike ulwazi oluhambelana nabo. Kude kuyilwe inkqubo entsha evulekileyo, masinamathele kwinto esaziyo ukuba iza kusebenza.
tags: apilecpiimeyile hashuphandoGoogle chromehashiidfaiOS 14Md5md5 hashid yesazisiiintengiso eziphathwayointengiso yeselulaibhokisi yesanti yabucalaSKAdNetwork